KLL miloko mavo plastika manarona ivelany, bokotra mainty, fantsom-SS, marika amin'ny lafiny roa amin'ny akorany, fandrehitra elektronika, mora entina, azo antoka azo ampandehanana, dia mety ho fenoina cartridge gazy butana, ampiasaina amin'ny fikarakarana sakafo, fanafanana bobongolo, defrosting, barbecue, toby ivelan'ny trano, welding sns sns ny lelafo dia lava sy mahery, afovoany miasa afovoany hatramin'ny 1300 degre.
Fanilo momba ny gazy KLL-Manual Torolàlana-7003D
Kavina azo ovaina loko KLL, vatan'ny varahina, fandrehitra tanana, novolavolaina manokana hampiasaina ivelany, azafady mba alao antoka fa tsy hampiasa azy io ao anaty buliding, fiara, ortens, satria misy loza ateraky ny fahafatesan'ny asphyxiation noho ny fizarana tocarbon dioxide na tsy fahampian'ny oxygen. . Na dia mampiasa azy io amin'ny efitrano tery aza dia alao antoka fa misy rivotra ampy, hafanana afovoan'ny afovoany hatramin'ny 1300 degre.
Fanilo momba ny gazy KLL-Manual Torolàlana-7005D
Klazy azo ovaina ny loko mavo KLL, fantsona SS, fantson-tsolika alimika, fanapoahana tanana, maivana, lelafo azo ovaina azo ampiasaina, manapotika maharitra ny firafitry ny sela ny fipoahana hafanana, mazàna ampiasaina amin'ny fantsona miondrika mba hamolavola, fantsom-baravarankely, fanalana ala ary asa fantson-drano hafa, famehezana Ny fifandraisana vita amin'ny PVC sy ny solder, ny fandrehitra ny BBQ sy ny afo sns dia mampiasa varingarina entona azo esorina ho loharanon-tsolika, hafanana afovoany miasa hatramin'ny 1300 degre.
Torolàlana fanilo gazy KLL-Manual Manual-7006D
Fehin-kibo azo ovaina ny loko, ny fantsom-SS lehibe misy lelafo hametrahana cartridge gazy, fandrehitra tanana, fanidiana hidin-trano tsy manam-paharoa hisorohana ny famoahana, famolavolana fikirakirana ergonomika, sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy akora simika mampidi-doza, tsy misy tariby; maivana, azo ovaina ny lelafo mampandeha ampiasaina, manapoaka maharitra ny firafitry ny sela ny fipoahana hafanana, matetika ampiasaina amin'ny fantsom-piondranana mba hamolavolana, fantsom-pandrika sy asa fantson-drano hafa, famehezana ny PVC sy ny fifandraisana efa nasiana solika, ny fandrehitra ny BBQ sy ny afo sns dia mampiasa entona mora azo. varingarina ho loharanon-tsolika, hafanana afovoany miasa hatramin'ny 1300 degre.
Torolàlana fanapoahana gazy KLL-Manual Manual-7008D
Kavina mainty azo ovaina ny loko mainty, fantsom-pifandraisana SS lehibe, fanapoahana tanana, fanidiana varingarina tsy manam-paharoa hisorohana ny famoahana, famolavolana fikirakirana ergonomika, sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy akora simika mampidi-doza, tsy misy tariby; maivana, azo ovaina ny lelafo mampandeha ampiasaina, manapoaka maharitra ny firafitry ny sela ny fipoahana hafanana, matetika ampiasaina amin'ny fantsom-piondranana mba hamolavolana, fantsom-pandrika sy asa fantson-drano hafa, famehezana ny PVC sy ny fifandraisana efa nasiana solika, ny fandrehitra ny BBQ sy ny afo sns dia mampiasa entona mora azo. varingarina ho loharanon-tsolika, hafanana afovoany miasa hatramin'ny 1300 degre.
Fanilo Gas-Manual Ignition KLL-Manual-7009D
Kavina mainty azo ovaina ny loko mainty, fantsom-SS lehibe misy lelafo hametrahana volo-tsolika, fanapoahana tanana, fanidiana varingarina tsy manam-paharoa hisorohana ny famoahana, famolavolana fikirakirana ergonomika, sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy akora simika mampidi-doza, tsy misy tariby; maivana, azo ovaina ny lelafo mampandeha ampiasaina, manapoaka maharitra ny firafitry ny sela ny fipoahana hafanana, matetika ampiasaina amin'ny fantsom-piondranana mba hamolavolana, fantsom-pandrika sy asa fantson-drano hafa, famehezana ny PVC sy ny fifandraisana efa nasiana solika, ny fandrehitra ny BBQ sy ny afo sns dia mampiasa entona mora azo. varingarina ho loharanon-tsolika, hafanana afovoany miasa hatramin'ny 1300 degre.
Klazy azo ovaina ny loko mavo KLL, fantsom-bozaka varahina misy cyclone kambana ao anatiny, fandrehitra tanana, fanidiana hidin-trano tsy manam-paharoa hisorohana ny famoahana, Ampiasaina ho an'ny tanany vita amin'ny hafanana sy ireo mpampifandray azy ireo. Ampiharo amin'ny microwelding inbolving varahina- welding, volafotsy-welding, vy-welding ary fikolokoloana firavaka. Fusing, welding, fitsaboana azo antoka ary fanamafisana eo an-toerana amin'ny atrikasa, garazy ary laboratoara. sns. mampiasa varingarina entona mora azo mora vidy ho loharanon-tsolika, hafanana afovoan'ny afovoany hatramin'ny 1300 degre.
Kavina mena azo ovaina ny loko mena, fantsom-barahina, fandrehitra tanana, fanidiana hidin-trano tsy manam-paharoa hisorohana ny famoahana, famolavolana fikirakirana ergonomika, sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy akora simika mampidi-doza, tsy misy tariby; maivana, azo ovaina ny lelafo mampandeha hampiasaina, ny fipoahana hafanana manimba mandrakizay ny firafitry ny sela, ny fampiasana fantsona fanamafisam-peo, ny fantsom-pandehanana ary ny asa fantsom-panafody hafa, ny famehezana ny PVC sy ny fifandraisana efa nasiana solika, ny fandrehitra ny BBQ sy ny afo sns dia mampiasa entona mora azo. varingarina ho loharanon-tsolika, hafanana afovoany miasa hatramin'ny 1300 degre.
Klazy azo ovaina ny loko mavo KLL, fantsona varahina, fantsom-piondrika SS, fandrehitra tanana, fanidiana varingarina tsy manam-paharoa hisorohana ny fivoahan'ny rano, Ampiasao amin'ny tanany vita amin'ny hafanana sy ireo mifandraika aminy. Ampiharo amin'ny microwelding inbolving varahina-welding, welding-volafotsy, welding-vy ary fikolokoloana firavaka. Fusing, welding, fitsaboana azo antoka ary fanamafisana eo an-toerana amin'ny atrikasa, garazy ary laboratoara. sns. mampiasa varingarina entona mora azo mora vidy ho loharanon-tsolika, hafanana afovoan'ny afovoany hatramin'ny 1300 degre.
Ny rakotra plastika miloko mavo KLL, fonony ivelany ary bokotra mainty, fantsom-pifandraisana SS misy seramika ao anatiny, fandrehitra elektronika, mora entina, azo antoka azo ampiasaina, dia mety ho fenoina cartridge gazy butana, ampiasaina amin'ny fikarakarana sakafo, fanafanana bobongolo, famonoana, barbecue , lasy an-kalamanjana, famafana sns. Ny lelafo dia lava sy mahery, afovoany afovoany miasa hatramin'ny 1300 degre.
Torolàlana momba ny gazy KLL-Piezo Ingition-8802D
Vatana ara-materialy zinc, fonosana loko mavo, bokotra mainty sy motera, fantsom-SS miaraka amina seramika, labozia amin'ny lafiny roa amin'ny akorany, fandrehitra elektronika, mora entina, azo antoka ampiasaina, azo fenoina baoritra entona entona, ampiasaina matetika amin'ny fanodinana sakafo, fanafanana bobongolo, famonoana rano, barbecue, lasy ivelan'ny trano, fantsom-panafody sns.